महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेका छन्, ‘हिजोबाट सिक, आजको लागि बाँच र भोलिमा आश गर ।’ बेलायतका लेखक तथा कवि टिएस इलिअटले भनेका छन्, ‘गएको वर्षको शब्द गएको वर्षकै भाषा थियो, अर्को वर्षले अर्कै भाषा प्रतीक्षा गर्दछ ।’
प्रत्येक बर्ष माघ १६ गतेलाइ सहिद दिबसको रुपमा मनाउदै आएको छौ। देश र राष्ट लागी हासी हासी आफ्नो जिवन को आहुती दिने ति महान सपुत नै सहिद हुन । तर जुन आकांक्षा साथ, जुन सपनाको साथ महान सहिदले जिबन उत्सर्ग गरे के साच्ची कै पुरा भएको छ त ?
बुवा ज्युले आफनो देहावसान पछि पनि आफनो शरीरको आँखा दान गर्नु भई समाजलाई सकारात्मक सन्देश प्रवाहा गरि जानु भयों ।
लाग्दछ, जिन्दगीको कुनै सिमितता हुँदैन, परिकल्पना हुँदैन र हुँदैन यसको कुनै निर्धारित मिति र समय । मान्छेले लिएर आएको देह कतिन्जेल भौतिक रुपमा जीवित होला भन्ने न त स्वयं देहधारण गरेको व्यक्तिलाई थाहा छ, न त दोश्रोलाई नै ।
दशैंको सांस्कृतिक, पौराणिक र बैज्ञानिक महत्व
दशैंको महत्वबारे चर्चा गर्नु पूर्व आजका बालबालिका र किशोर किशोरीहरूको मनोविज्ञानको बारेमा थोरै चर्चा गर्नु सान्दर्भिक होला । हाम्रो हिन्दू संस्कृतिमा भएका चाडपर्व रीतिरिवाज आदिमा सुन्दै हाँसो लाग्ने अलौकिक वा जादुगरी कथा किम्बदन्ती जोडिएर आएका छन् । वेद पूराण र किम्बदन्ति कथाहरू लोक साहित्य हुन् ।
दशै प्राचीन कालदेखि मानि आएको पूर्वीय दर्शन अन्तर्गतको विशिष्ट सँस्कृतिक पर्व हो । जसले मातृसत्ताको सम्झना गराउँदै । नारी जातीलाई समाजले उच्च स्थानमा राखेको थियो भन्ने विषयमा पनि दशैको महत्व रहेको छ ।
दोहोरीलाइ फोहोरी हुन बाट कसरी बचाउने ?
अहिले राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको छैठौँ महाधिवेशनले लोक क्षेत्र तातेको छ । नतातोस् पनि कसरी सृजनाका फूलहरुले भरिपुर्ण यो क्षेत्रमा राजनीतिको रस गजबले पसेको छ । हो राजनीति हरेका क्षेत्रमा हुन्छ तर नीतिलाइ भन्दा ब्यत्तिको जीत र हारलाई प्राथमिकता दिए पछि गडबढ सुरु हुन थाल्छ ।
परम्परा गत पशुपंक्षिपालन व्यवशाय जस्तै कुखुरा पालनगाइ भैसी पालन भेडा बाख्रापालन ब्रंगुर पालनले बेला बेलामाविभिन्नखाले आर्थीक क्षती ब्यहोरेका छन् । सरुवातथा संर्पकित रोगहरुको अचानकमाहामारी देखा पर्नु जस्का कारण उत्पादनअचानकहास आउनु जलवायु परिवर्तन अत्याधिक गर्मी तथा खानेपानीको अभाव जस्तो यस्का धेरै कारणहरु छन् ।अष्ट्रिच पालन पशुपालनव्यवशायको परीपुरकको रुपमा वढी नाफा मुलुक पशुपंक्षि पालन व्यवशायको रुपमा निकट भविष्यमा स्थापीत हुने सम्भावना देखिन्छ ।
गत सोमबार सुशीला कार्कीले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिन् । नेपालको न्यायिक इतिहासमा महिलाले नेतृत्व लिनु निकै ठूलो उपलब्धि हो । सुनौलो संयोग नै मान्नु पर्दछ कि उनले नेपालकी प्रथम महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सपथ लिइन् ।
लुम्बिनीः बुद्धको शाश्वत मातृभूमि
लुम्बिनी पश्चिम नेपालको तराईमा अवस्थित रूपन्देही जिल्लाको सदरमुकाम सिद्धार्थनगरदेखि २२ कि.मी. दक्षिण–पश्चिम एवं तेलार नदीको पश्चिमी किनारमा अवस्थित छ । यहाँ कपिलवस्तुका शाक्यवंशी शासक शुद्धोधनकी पत्नी मायादेवीको कोखबाट ई.पू. ५६३ वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा सिद्धार्थ गौतम बुद्धको जन्म भएको थियो । सुत्तनिपात लगायतका बौद्ध साहित्यमा लुम्बिनी वारे उल्लेख गरिएको छ ।
बुद्धका उपदेशहरुलाई व्यवहारमा अँगालौं
बुद्धकालीन एक समयमा अंगुलीमाल नामक भयंकर हत्याराले पुरै नगर थर्कमान बनाएको थियो । मान्छे मारेर औलाको माला लगाउँदै हिड्ने भएकाले उसको नाम नै अंगुलीमाल थियो ।
पार्टी एकता सम्बन्धी दुई दृष्टिकोण
एमाओवादीसितको वार्ताप्रक्रिया केन्द्रको निर्णय तथा केन्द्रद्वारा निर्धारित टोलीद्वारा नभई गुटगत रूपमा विभिन्न कमरेडहरूद्वारा हुँदै आएको छ र अहिले त्यसप्रक्रियाले निकै तिव्रता पाएको छ ।
नर्सको काम सुई लगाउने र सलाइन चढाउने मात्रै हो र !
‘नर्सको काम बिरामीलाई सुई लगाउने र सलाइन चढाउने त हो नि’ भन्ने सोचाइ राख्ने पढालेखाको जमात ठूलै छ । यो जमातभित्र पर्नेले नर्स अर्थात् नर्सिङ पेशाको महत्व बुझेका हुँदैनन् । अहिले नर्सिङको कार्यक्षेत्र फराकिलो भएको छ । अस्पताल बाहिरका विभिन्न काममा पनि नर्सको महत्व बढ्दो छ । अस्पतालभित्र पनि नर्सका काम यति मात्रै हुँदैनन् ।
हाम्रो देशले यतिवेला राजनीतिक आन्दोलनको एउटा अवस्था पार गरेकोछ र उक्त आन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरु नेपालको सम्बिधान २०७२ ले संस्थागत समेत गरिेसकेकोछ । अव देशले परिवर्तित परिस्थिति र आवश्यकताका आधारमा संसोधन गर्दै समस्याहरुको निरुपण गर्दै जाने हो ।
के सुगौली सन्धिको पुनरावृत्ति गर्न खोजिदैछ ?
नयाँ प्रकारले सुगौली सन्धिको पुनरावृत्ति त हुँदै छैन ? देशमा यो गम्भीर खतरा बढ्दै गइरहेको छ। खतरा त्योभन्दा ठूलो छ । सुगौली सन्धिद्वारा देशका केही भागमा मात्र अंग्रेजले कब्जा गरेको थियो । अहिले त पूरै नेपालमा भारतको कब्जा हुने खतरा देखा पर्दैछ।जब नेपालका तत्कालीन शाहवंशीय राजाहरूले अंग्रेजसित सम्झौता गरेर देशका केही भाग अंग्रेजलाई सुम्पेका थिए, अंग्रेजविरुद्ध युद्ध गरिरहेका अमरसिंह थापालाई ठूलो मानसिक चोट पुगेको थियो।
बस् सब ठीक ठाक छ !
अत्यधिक गर्मी समयमा घामले तातेको पीच सडकमा यात्रा गर्दा सडकमा पानीको सतह जस्तो दृष्य देखिन्छ, जसमा वस्तुहरु उल्टो दृष्टिगोचर हुन्छन् । भौतिक विज्ञानमा यसरी देखिने दृष्यलाई दृष्टिभ्रम अर्थात् मिराज भनिन्छ । अहिले मुलुक असाध्यै कष्टकर अवस्थामा छ । झण्डै साँढे तीन महिनादेखि चलेको तराई मधेश आन्दोलन र दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखिको भारतीय नाकाबन्दीले अहिले मुलुक अत्यन्तै संकट ग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । अनि आम जनताको दैनिकी अत्यन्तै अभावग्रस्त बन्न पुगेको छ । इन्धन तथा अन्य अत्यावश्यकीय वस्तुहरुको अभावका कारण स्कूल, कलेज, कार्यालयदेखि अस्पताल सम्मका कामहरु निकै प्रभावित बन्न पुगेको छ ।
इतिहासको उषाकालले के देखाउँछ भने नेपालको क्षेत्रफल विशाल थियो । मध्यकालीन विशाल नेपाल तत्कालीन राजाहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति सरह अंशवन्डा गरिँदै गएपछि आपसी झैझगडा समेतका कारण खण्डित हुँदै गएको प्रमाण पाइन्छ ।
२८ मे १७५७ मा विजयादशमीको दिन पारेर गोर्खाली सेनाले कीर्तिपुरमाथि आक्रमण ग¥यो । बल्खु खोलाको किनारमा ६ घण्टासम्म भएको लडाइँमा ४०० गोर्खाली सैनिकसहित काजी कालु पाँडेको मृत्यु भयो । यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले सैनिक व्यवस्था मिलाउने उद्देश्यले केही समयका लागि युद्ध रोके ।
यी हुन् सरकारका तत्कालीन कार्यादेश
तराई–मधेसको बन्द, हडताल र आपूर्ति प्रणालीको अवरोधका कारण भोग्नुपरेको अनपेक्षित समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले राजनीतिक संवाद र कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ । उपलब्ध इन्धन र उपभोग्य सामग्रीको वितरणव्यवस्थापनलाई न्यायोचित बनाउन उपलब्ध सबै विकल्पलाई उपयोग गरिरहेको छ । वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाई जनजीवन सामान्य बनाउन र वर्तमान परिस्थितिका कारण अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावलाई कम गर्न कार्यदिशा तय गरिएको छ ।
नेपाल असफल नहुने ९ कारण
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यसैसाता राजधानीमा आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधनका क्रममा नेपाल असफल राष्ट्र नहुनेमा ढुक्क हुन आमजनता र निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका थिए । उनको सम्बोधनमा असफल राष्ट्र नहुने यस्ता कारण छन् ।
संविधानको प्रसङ्गमा भन्नुपर्दा आज संविधान जारी भएको डेढ महिना व्यतित भइसक्दा पनि देशव्यापी रुपमा नेपाली जनताले संविधान प्राप्तिमा सन्तोष मान्दै हर्षोल्लास मनाउने कुरा त परै छाडौँ, जीविकोपार्जनका लागि नै पनि संघर्ष गर्नुपर्ने विरक्त लाग्दो स्थिति पैदा भइदिँदा मानवअधिकार र मौलिक हकका यस्ता व्यवस्थाहरु खल्लो र ओझेलमा परेको देखिएका छन् ।
‘नयाँ शक्ति’ को पहेली
पछिल्लो राजनीतिक परिदृष्यमा एकीकृत माओवादीका बरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पार्टी परित्यागको घटना चर्चाको शिखरमा छ । यसपालीको दसैं बिदाको बसिबिँयालोमा गाउँघरदेखि सहरबजारसम्म गफ गर्ने विषय भारतीय नाकाबन्दी र डा. भट्टराईको पार्टी परित्याग बन्न पुग्यो । कतिले यी दुई परिघटनालाई जर्बजस्त रुपमा जोडेर हेरेको पनि देखियो ।
नाकाबन्दीको सामना यसरी गरौ
भारतीय नाकाबन्दीले नेपालसामु कठिन स्थिति सिर्जना गरेको छ। सामान्य रूपले हेर्दा त्यो नाकाबन्दीले पैदा गरेको सिमानाको प्रकृति तात्कालिक र आर्थिक जस्तो देखिन्छ, तर समस्यामाथि समग्र रूपले विचार गर्दा त्यसको प्रकृति दीर्घकालीन र राजनीतिक प्रकारको भएको बुझ्न गाहो पर्ने छैन।
‘संविधानका पिता’ कोइराला र लोकतान्त्रिक अभ्यास
नयाँ संबिधान जारी भए पश्चात नेपाली राजनीतिमा ठुलो परिवर्तन देखा पर्यो, चाहे त्यो राष्ट्रियताको सवालमा होस् या नयाँ सरकार गठनको सवालमा करिब आठ बर्ष देखि जन्म हुन नसकेको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल को संबिधानको प्राकृतिक जन्म गराएर संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संबिधान २०७२ का पिता बन्न पूर्व प्रधानमंत्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला सफल भएका छन् ।
‘मैले यसकारण सद्भावना पार्टी परित्याग गरे’
मधेश अहिले पनि आन्दोलित छ । हरेक तह र तबका का जनता सडकमा छन । ४० जना भन्दा बढी मधेशी आंदोलनकारी शहीद भई सकेका छन । उनी हरुको मांग र आकांक्षाको सम्बोधन भएको छैन। यस बीच हिजो नया सरकारको निर्माणमा आंदोलनकारी मधेशी दलको नेतृत्व वर्गले लगभग ६० दिन हुन लागेको अनिश्चितकालीन हडताल लाई एउटा निष्कर्षमा न पुरयाई आफूले अस्वीकार गरी सकेको सम्विधान अन्तर्गत संसदमा सरकार निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी भई मधेशको आत्म सम्मान मा गहिरो चोट पुरयाएका छन ।
चुनौतीको चाङ पन्छाउन सफल होलान् त ओली ?
काठमाडौ । आफ्नो राजनीतिक यात्राको पचासौं वर्षमा टेक्दै गर्दा सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने मौका पाएका एमाले अध्यक्ष ओली जति सहज ढंगले आइतबार निर्वाचित भए, उनको अगाडिको बाटो भने त्यसको ठीक विपरित कठीन चुनौतीहरुले भरिएको देखिन्छ।
चियापसलका चर्चा र प्रधानमन्त्री निर्वाचन
चर्चामा छ प्रधानमन्त्रीको चुनाब सुशील कोइराला र केपी ओलीबीच नभइ केपी ओली र नरेन्द्र मोदीबीच हुँदै छ । यसकारण ओलीले जित्नैपर्छ यसो हुँदा हाम्रो राष्ट्रवाद जोगिन्छ । कुरा बडो मिठो र राष्ट्रवादी सुनिन्छ । सुन्दा पनि मजा आउँछ एउटा राष्ट्रवादी भएका नाताले ।
के हामी कसैको संकेत कुरिरहेका थियौँ ?
नेताहरुलाई मेरो प्रश्न छ यदि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने उपयुक्त हुन्छ भन्ने मुख्य नेतृत्वलाई लागेको थियो भने यत्रो दिनसम्म के हेरेर बसिरहेको? के हामी कसैको संकेत कुरिरहेका थियौँ?
मधेशको समस्या सुल्झाउन एमालेबेगरको सरकार
आर. के. चौरसिया
एमाले र ओलीले मधेश आन्दोलनलाई भारतीयहरुले गरेको आन्दोलन भनेपछि मधेश एमाले र ओलीसँग असन्तुष्ट छ । मधेशको समर्थन नपाउने सरकारले मधेशको समस्या समाधान गर्न नसक्ने विषयले पछिल्लो समयमा चर्चा पाइरहेको छ ।
मोदीजी, आफु हेपिएको बदला नेपालसँग नलिनू !
अपमानले मान्छेलाई चिढ्याउने हो, दास बनाउन सक्दैन । फेरि सार्वभौमिकता भनेको कति प्यारो हुन्छ भनेर भारत आफैँले पनि जान्नुपर्ने हो किनकि भारतको सार्वभौमिकता पनि अभेद्य छैन जसलाई इतिहासमा बेलायतले रुवायो, वर्तमानमा चीनले तर्साइरहन्छ ।
राजीनामा घोषणा गर्दै बाबुरामले यसो भने